Ndị ndụmọdụ ndụmọdụ gbasara mgbasa ozi ọhụụ - Ọchụchọ, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, vidiyo na ekwentị mkpanaaka
Saturday, July 3, 2010 Tọzdee, Ọktoba 29, 2020 Douglas Karr
Mgbe m bidoro DK New Media, otu n'ime mkpebi ime bụ n'ezie otu esi ama ụlọ ọrụ. Ka m na-eche maka ịzụ ahịa na ntopute ya, m na-atụnyere ya na onye na-eduzi ihe na egwu egwu. Dị ka onye ndụmọdụ, ọ dị m mkpa ịdị ka onye nduzi, na-enyere aka jikọta ndị na-ajụ mmụọ dị iche iche ma mee ka ha nwee ike ịkụ ihe ederede kwesịrị ekwesị n'oge kwesịrị ekwesị, ka usoro a wee mezuo nke ọma.
Achọghị m afọ onwe m site na-akpọ onwe m dị ka a ọkachamara n'ahịa. Achọghị m igbochi onwe m site na ịkpọ onwe m a ọchụchọ ndụmọdụ or onye na-ahụ maka mgbasa ozi na-elekọta mmadụ. Nke ahụ dị ka ịsị na ị bụ onye violin, flautist, ma ọ bụ onye na-akụ ụda. Kama, achọrọ m ịkọwa onwe m n'ihu ọha.
Medialọ ọrụ mgbasa ozi ọhụụ apụtaghị na m na-eleghara mgbasa ozi ochie anya, ọ dịghịkwa egbochi m n'ọdịnihu. A ga-enwe mgbe niile ihe ọhụrụ. Usoro mgbasa ozi ọhụụ nwere ike ịgụnye ọchụchọ, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, vidiyo, ekwentị mkpanaaka… ma ọ bụ ihe ọ bụla gbadara ọkpọkọ. Nke a apụtaghị na m ga-akwalite onwe m dị ka ọkachamara na mpaghara egwuregwu ahụ niile. Mụ na ndị ụlọ ọrụ ibe m na ụlọ ọrụ ndị ọkachamara na isiokwu ndị ahụ na-arụkọ ọrụ.
Dịka onye ndụmọdụ gbasara mgbasa ozi ọhụụ, ọ na-atụ anya atụmanya m ga - enyere aka ọ bụla media… ma kuziere ndị ahịa m ihe kachasị ọhụrụ na usoro mgbasa ozi. M na-agbalị ịmụ banyere na iru ọkachamara na ụdị ọhụụ kachasị ọhụrụ. Site n’oge ruo n’oge, m na-ekwu na m do social media consulting or search consulting consult mana anaghị m akpọ onwe m sọọsọ na mpaghara ndị ahụ.
Ndi ndu abughi ndi okacha mara nma nke nwere ngwa ahia obula; n'agbanyeghị nke a, ha ghọtara nke ọma otu esi ewepụta ngwa ọrụ ọ bụla, mee ka ha niile na-arụkọ ọrụ ọnụ, ma nwee ọmarịcha egwu. Nke a bụ orchestration ahịa.
Ọ dị njọ na anyị akpọghị onwe anyị ndị nduzi ahịa!
Nke a bụ ịme ụfọdụ egwu egwu mara mma!
Tags: ituleeduziọkachamara n'ahịaịzụ ahịaorchestration ahịaMusicihe eji egwu